Saaxiibo is jeclaa oo naftu siisay inay iska tuuraan dabaq 34 biyaane ah,(maxay tahay sababtu). - iftineducation.com
Saaxiibo is jeclaa oo naftu siisay inay iska tuuraan dabaq 34 biyaane ah,(maxay tahay sababtu).
aadan21 / January 19, 2012
iftineducation.com-Labadani saaxiibood ee lab iyo dhidiga ahaa ayaa la shaaaciyey in maalinimadii Qamiista ee aynu kasoo gudubnay ay iska soo tuureen biyaanda ugu sareysa guri ka koobnaa 34-biyaano.
Wiilkaa iyo gabaadhaasi oo in muddo ah ka dhexeeyey jacayl aad u weyn ayaa heshiis buuxda ku maray in ay iska soo tuuraan dabaqaasi 34-ta biyaane ah, markii waalidkii dhalay labadaasi is mucaashaqday ay isu diideen islmarkaana u sheegay in ay kala haraan.
Xiligi ay iska tuurayeen dabaqa dushiisa ayaa waxaa la sheegay inay gacmaha is heysteen, iyagoo qaadayey erayo muujinayay kalsoonida iyo daacadnimada ay isku qabeen, kuwaasoo ka mid ahaa kala hari meeynee ina wad aan kula dhadhamiyo hoog iyo waxwalba.
Wiilkani iyo gabadha oo lagu kala magacaabo Wong Yat-Long iyo Yang Ying ayaa meydkooda waxaa daarta hoosteeda kasoo qaaday booliska Hong-kong oo durbadiiba waalidkooda ku wargliyey in ey iska soo rideen dabaqa ugu sareeya Hong-kong ee ayna dhinteen.
Baro Dalkaaga Hooyo – Wershedaha Soomaaliya